Midab midab leh oo ku habboon shaqo kasta naqshadeynta | Abuurista khadka tooska ah
Angela Wright waxay isbedel ku sameysay aragtida midabka iyadoo cadeynaysa isku xirnaanta ka dhaxeysa qaababka midabka iyo qaababka dhaqanka aadanaha. Waxay ogaatay in dhammaan midabada loo kala saari karo afar qaybood oo midab leh. Kadibna wuxuu horumariyay nidaamka Saameynta Midabka kaas oo tilmaamaya xiriirka ka dhexeeya afar cod midab leh iyo afar nooc oo shaqsiyan ah. Haddii si sax ah loo isticmaalo, naqshadeeyayaasha ayaa isticmaali kara Midabku wuu saameeyaa si loo xakameeyo fariinta midabkaaga midabka leh.
1 Sida cilmi nafsiga midabku u shaqeeyo
2 Kooxda midabka 1
3 Kooxda midabka labaad
4 Kooxda 3
5 Shakhsiyadda kooxda 4aad
Sida cilmi nafsiga midabku u shaqeeyo
Midabku waa iftiin, annaga oo xagga hirarka qorraxda uga imanaya xaggayada, isla electromagnetic spectrum sida raadiyaha iyo hirarka telefishanka, microwaves, X-rays, iwm. Iftiinku waa qaybta kaliya ee muuqaalka ah ee aan arki karno, taas oo laga yaabo inay sharraxdo sababta aan ugu qaadanayno si ka culus sidii aan muuqan lahayn ee shucaaca kale. Isaac Newton wuxuu cadeeyay in iftiinka uu ku dhex socdo mowjado, markii iftiinka cad uu ka soo ifbaxay bir saddex geesle ah, iyo markii hirar kala duwan oo hirar ah xaglo kala duwan laga beddelo, wuxuu awood u yeeshay inuu muujiyo in midabada qaansoroobaadku (qaybta sare) ay yihiin qaybaha iftiinka.
Markuu iftiinku ku dhaco shay kasta oo midab leh, shaygu wuxuu nuugi doonaa oo keliya dhererka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka oo si sax ah ugu habboon qaab-dhismeedkaaga atomiga ah isla markaana ka tarjumaya inta kale, taas oo ah waxa aan aragno. Midabku waa tamar oo xaqiiqda jir ahaaneed ee ay inagu yeelato ayaa lagu cadeeyay waqtiyo iyo marar badan tijaabooyin, gaar ahaan markii dadka indhoolayaasha ah la waydiiyay inay ku aqoonsadaan midabada farahooda cid walbana ay u suurta gashay inay si fudud ku sameyso.
Dhererka dhererka oo ka gaaban, ayaa sii xoogeysanaya saameynta jireed ee salka ku haysa.
Qodobka ugu muhiimsan ee Angela Wright ayaa la aqoonsaday markii la baranayay cilmu-nafsiga midabka waxay ahayd in, si siman, aysan jirin midabbo qaldan; Waa nidaamka midabka ee kiciya jawaabta; Waxaa laga yaabaa inaan haysto cirro cirro leh xagaaga, laakiin falcelintayada ilaa cirro leh midabbada quruxda badan ee xagaaga xagaaga way ka duwanaan lahayd isku darka cir cirro oo leh muuqaal baraf cad u badan.
Kooxda midabka 1
Kooxda 1 midabada waa iftiin, jilicsan oo diiran, oo ay ku jiraan jaalle, laakiin ma aha madow. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah kareem jilicsan, turquoise, iyo cobalt. “Waa dad firfircoon, macaan, cusub, nadiif ah oo dhalinyaro ah; wax walba oo ku saabsan bilowga cusub, "ayuu yiri Wright.
Shakhsiyaadka midabyadani ka tarjumayaan "waa kuwo dibedda ku dhiirrigeliya oo weligoodna dhallinyaro ah." Iftiinka cagahooda, dadkani waxay jecel yihiin qoob-ka-ciyaarka oo waa caqli badan yihiin, laakiin ma jecla inay ku mashquulaan dood cilmiyeed.
Kooxda midabka labaad
Kooxda midabada 2 waa qabow (waxaa ku jira buluug), dhexaad ah (badankood waxaa ku jira cawl) oo jilicsan, laakiin daruuri maahan iftiin, tusaale ahaan raspberry, maroon, ama cagaarka cagaaran. Astaamaha waxaa ka mid ah xarrago iyo waqti la'aan.
“Shakhsiyaadka waa qabow, deggan yihiin oo kooban,” ayuu yiri Wright. Iyagu waa kuwo gudaha ku dhiirrigeliya, laakiin waxay aad ugu nugul yihiin sida dadka kale u dareemaan. Iyagu ma doonayaan in ay safka hore ka noqdaan wax kasta, laakiin iyagu waxay ahaan doonaan awoodda ka dambeysa daahfurka.
Kooxda midabada 3 way ka diirran yihiin Kooxda 1 (waxay ka kooban yihiin hadh badan oo salka jaalaha ah), aad u daran oo olol leh, oo ay ku jiraan madow. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah cagaarka saytuunka, liinta gubatay, iyo ukunta.
Saaxiibtinimo, dhaqameed, oo lagu kalsoonaan karo, muraayadahaani waxay caan ku yihiin sumadda iyo u shaqeynta shirkadaha si fiican u dhisan. Si kastaba ha noqotee, waxay soo gudbin karaan dabeecad kali-talisnimo ah ama waxay umuuqan karaan dhacsan haddii si qaldan loo adeegsaday.
Shakhsiyadda kooxda 4aad
Kooxda midabada 4 waxay ka kooban tahay buluug. Waxay yihiin daahir aadna u fudud, aad u madow ama aad u daran. Ka kooban madow, caddaan, magenta, liin iyo indigo, astaamaha kooxdan waxaa ka mid ah hufnaan, faafitaan iyo heer sare, laakiin si khaldan loo isticmaalay, midabada waxaa loo arki karaa inay yihiin kuwo aan fiicnayn, maadi ah oo qaali ah.
Ficil ahaan, cilmu-nafsiga midabku wuxuu u shaqeeyaa laba heer: heerka koowaad waa astaamaha aasaasiga ah ee cilmu-nafsiga ee kow iyo tobanka midabada aasaasiga ah, kuwaas oo ah mid caalami ah, iyadoo aan loo eegin midab gaar ah, midab ama midab aad isticmaasho. Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu leeyahay saameyn nafsaani ah oo togan ama taban oo saameyntaas la abuuri karo waxay kuxirantahay noocyada shakhsiyadeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Midab midab leh oo shaqo ku habboon